ကုလားပဲထမင်း – Thet Nandar
ဒီတခါ ချက်တဲ့ ပဲထမင်းက စမုံစပါးကို ထောပတ်ဆီသတ်ပီး … ရေစိမ်ထားတဲ့ ကုလားပဲ နှင့် ချက်ထားသော ပဲထမင်းဖြစ်ပါတယ် …
ဒီတခါ ကုလားပဲကို မနူးမနပ် အရင်ပြုပ်ပီး မချက်ပဲ ..
ထမင်းနှင့် မချက်ခင် ၃ နာရီလောက် ရေစိမ်ထားသော ကုလားပဲ နှင့် ချက်ထားသော …
ဒီတခါ ပဲထမင်းကို ဘလချောင်ကြော် နှင့် နှယ်မစားပဲ .. ကုလားပဲ ဒိန်ချဉ် .. အချဉ်ရည် စမ်းစားပါတယ် …
အမဲသား ထောပတ် ကြော်နှပ်
အမဲသားဟင်း နှင့် ပဲထမင်း
….. ချက်၊ စားနည်း …..
ကုလားပဲ ကို မချက်ခင် ၃ နာရီလောက် ရေ အရင် ကြိုစိမ်ထားလိုက်ပါတယ် ….
ဆန် – 1 cup
ကုလားပဲ – 1/2 cup
ဂီးလ် .. ထောပတ် – ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း
စမုံစပါး – လက်ဘက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
ဆား – လက်ဘက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
မီးမြေးမြေး နှင့် မိနစ် ၂၀
မီးမြေးမြေး အနေအထားနဲ့ ထောပတ်ကို အရည်ပျော်အောင် အရင် ချက်လိုက်ပီး ..
ထောပတ် အရည်ပျော်တာနဲ့ စမုံစပါးကို ထည့် …
၃ နာရီလောက် ရေစိမ်ထားသော ကုလားပဲများကို ရေစစ်ပီး ထည့်ကြော် …
ကုလားပဲ ထည့်မွှေပီး .. တအောင့်ကြာမှ ဆန်၊ ဆား ထည့်မွှေပါ …
rice cooker နဲ့ ချက်မယ် ဆိုရင် ပုံမှန် ထမင်း ချက်တဲ့ ရေပမာဏ ထက် နည်းနည်း ပိုထည့်ပေးပီး …
မီးဖိုမီးနဲ့ ချက်မယ် ဆိုရင်တော့ မီးမြေးမြေး အနေအထားနဲ့ မိနစ် ၂၀ .. ၂၅ မိနစ်လောက်ဆို ပဲထမင်း ရပါပီ ….
ထောပတ်နှင့် ချက်ထားသော ပဲထမင်း
အမဲသား ထောပတ် ကြော် နှပ် အတွက် .. ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဂျင်း ကို ထောင်း …
ခရမ်းချဉ်သီး တလုံးကိုပါ ကြိတ်ထားလိုက်ပီး …
အမဲသားကို ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန့် နဲ့ နှယ်ပီး ခဏလောက် နှပ်ထားလိုက်ပါတယ် ….
မီးဖိုပေါ်မှာ မီးမြေးမြေး အနေအထား နှင့် ထောပတ် ၄ အောင်စလောက်ကို အရည်ပျော်အောင် အပူပေးပီးတာနဲ့ ဖာလာစေ့ ၃ စေ့၊ နံနံစေ့ .. တို့ကို ထည့်ဆီသတ်၊ ပျဉ်တော်သိမ် ကို အရွက်တွေ ခြွေပီး ထည့်ဆီသတ်ပီးတာနဲ့ နှပ်ထားတဲ့ အမဲသားကို ထည့်ကြော်ပါတယ် …
ဒီတခါ အမဲသားကို ထောပတ် နှင့် ကြော်ပီးမှ ဟင်း အနှစ်များနှင့် ပြန်နှပ်ချက်တာပါ ..
အမဲသားတုံးများကို ကြော်ပီး ခဏဆယ်ထားပါ …
ကျန်နေတဲ့ ထောပတ်ဆီထဲ ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဂျင်း ထည့် ဆီသတ် ..
ဆနွင်းမှုန့်၊ ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့် ထည့် …
ကြိတ်ထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး အနှစ်တွေ ထည့် …
ကြော်ထားသော အမဲသားတုံးများထည့် … လုံး ပီး ..
နှံစပ်နေအောင် မွှေပီးမှ .. ရေ အလော်တော်လောက် ထည့် .. အဖုံးအုပ် …
အမဲသား နူးလာခါနီးမှ သံပုရာရည် ( လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ) ညစ်ထားတာ လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်းလောက် ထည့်ပီး ဆီပြန်နေအောင် ချက်ထားသော …
ပဲထမင်းမှာ ဆမ်းစားဖို့ ကုလားပဲ ဒိန်ချဉ် ( အချဉ် ) ပါ …
ဒိန်ချဉ် – 1 cup
ကုလားပဲမှုန့် – ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း
သစ်ကြားပိုးခေါက် – ၁ ခု
စမုံစပါး – လက်ဘက်ရည်ဇွန်း -တ၀က်
လေညင်းပွင့် – ၂ ခု
ကရဝေးရွက် – ၁ရွက်
မုန်ညင်းစေ့ – လက်ဘက်ရည်ဇွန်း – တ၀က်
ပျဉ်တော်သိမ်ရွက် – ၅ ရွက်
ငရုတ်သီးစိမ်း – ၂ တောင့်
ငရုတ်သီးခြောက် – ၂တောင့်
ရေ –2cups
ထောပတ် ( ထမင်းစားဇွန်း – ၁ဇွန်း ) ကို အရင်ဆုံး ပျော်အောင် မီးမြေးမြေး နှင့် အပူပေးပီးတာနဲ့ တပြိုင်နက် …
ငရုတ်သီးခြောက် အတောင့် ၂ တောင့်ကို မီးမြေးမြေးနှင့် ကြော်ပီး ..
( ငရုတ်သီးကြော် … အရမ်းကြီး မမဲခင်မှာ ) ..
စမုံစပါး ( လက်ဘက်ရည်ဇွန်း – တ၀က် )
မုန်ညင်းစေ့ ( လက်ဘက်ရည်ဇွန်း – တ၀က် )
ကရဝေးရွက် – ၁ ရွက်
ပျဉ်တော်သိမ်ရွက် – ၅ ရွက် .. ဆီသတ်ကြော်ပီးတာနဲ့ တပြိုင်နက် …
ဒိန်ချဉ် – 1 cup ထည့်မွှေ
သကြား ( လက်ဘက်ရည်ဇွန်း – ၁ ဇွန်း ) ထည့်မွှေပေးပီး ..
( ဒိန်ချဉ် အဖတ်လေးတွေ မဖြစ်အောင် အဆက်မပြတ်မွှေနေရင်းနဲ့ .. )
ကုလားပဲမှုန့် ( ထမင်းစားဇွန်း – ၁ ဇွန်း ) + ရေ –2cups ဖျော်ထားသော ကုလားပဲ အရည်ကိုလောင်းထည့် ..
အဖတ်တွေ မဖြစ်အာင် ဇွန်းနှင့် အဆက်မပြတ်မွှေပေးရင်း …
ဆား အနည်းငယ် နှင့် အတူ .. ငရုတ်သီးစိမ်း ၂တောင့်ကို ထက်ပိုင်းချိုးပီး ထည့်မွှေပေးပါ ..
မပျစ်မကျဲ .. ပဲထမင်း နှင့် ဆမ်းစားလို့ ရတဲ့ အနေအထား ချက်ထားသော …
ကုလားပဲ ထောပတ် ဒိန်ချဉ် ( အချဉ် )
ပဲထမင်း နှင့် အချဉ်
သစ်ကြားပိုးခေါက်၊ ကရဝေးရွက်၊ နာနတ်ပွင့် နှင့် ချက်ထားသော ပဲထမင်း
စကားမစပ် … ကိုယ် .. thetnandar.myanmar FB a/c ( အသစ် ) ဖွင့်ပီးကတည်းကလေ .. ဒီနေ့ မြန်မာ သတင်းတွေကို အလျင်မှီအောင် မနည်းလိုက်ဖတ်နေရတာမို့ .. ကိုယ့် FB a/c update မဖြစ်တာကို နားလည်ပေးပါ ..
ကိုယ်ပဲ .. သူငယ်ချင်း အဖြစ်နှင့် လိုက်အပ်ပါမည် … ကိုယ့် ကို FB a/c အပ်ထားပီးမှ FB a/c က active မဖြစ်တဲ့ အတွက် .. လာအပ်ထားသောသူများကို အားနာလို့ပါ …
သီရိရတနာ ဘလော့မှာပဲ update ဖြစ်မှာပါ …
ကိုယ့်ရဲ့ personal တွေလည်း ဒီမှာပဲ update ဖြစ်မှာပါ …
blog က မှတ်တမ်း သိမ်းပုံ သိမ်းနည်း အစဉ်တကျ နှင့် သပ်ရပ်တာမို့ blog မှာ မှတ်တမ်းလေးတွေ သိမ်းရတာကို ပိုသဘောကျပါတယ် ..
FB a/c တခါ ၀င်လိုက်ရင် ဖတ်စရာတွေ .. သတင်းထူး .. တွေလည်း အများကြီးပါပဲ …
Friends list Feed တခု ကနေ တခု ကို သွားပီး ဖတ်နေတာနဲ့တင် ..
အနည်းဆုံး … ၁ နာရီ … ၂ နာရီလောက် ကြာပါတယ် …
ရှမ်းမလေး အတွက် တကယ့်ကိုပဲ စိတ်မကောင်းပါဘူး …
ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ … ငြိမ်းချမ်းစွာ အိပ်စက်နိုင်ပါစေ ….
March 28, 2012 Thet Nandar
2 thoughts on “ကုလားပဲထမင်း”
ပဲထမင်းကို .. ထောပတ် နှင့် ဆီသတ်ပီး ကိုယ့် ကြိုက်နှစ်သက်မယ့် ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင်များ နှင့် ချက်စားလို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးချင်တာပါ …